Shiinaha Soosaarka Bacda Dabka Daran | Warshad | Jiashun
Qalabka dharka ee loo adeegsaday bacda dabka ka ilaalinaysa dabka waa caag silikoon ah, maro fiber dhalo ah, filim aluminium ah, iwm.
Dab-damis iyo biyo-la'aan - oo ka samaysan silikoon dahaar leh muraayad silig ah oo muraayadda muraayadda muraayadda ah iyo aluminium ku dhex jira dharka aluminium, ayaa iska caabin kara illaa 1000 ° C (qiyaastii 1832 ° F) Markaa waad ilaalin kartaa dhammaan waxyaabaha qiimaha leh ee 100% aamin ah.
Dab-damis iyo biyo-la'aan - oo ka samaysan silikoon dahaar leh muraayad silig ah oo muraayadda muraayadda muraayadda ah iyo aluminium ku dhex jira dharka aluminium, ayaa iska caabin kara illaa 1000 ° C (qiyaastii 1832 ° F) Markaa waad ilaalin kartaa dhammaan waxyaabaha qiimaha leh ee 100% aamin ah. Kuleylka kuleylka iyo iska caabinta heerkulka sare - oo waxaad siisaa maro heerkulkeedu sareeyo oo heerkullo kala duwan leh, sida dharka vermiculite, maro silica ah oo sarreeya, silig bir bir ah oo birta ka samaysan oo la xoojiyey, iyo wixii la mid ah. Tiknoolajiyadda dharka lagu tolo ayaa ah mid adag oo qaan gaar ah, waxayna leedahay sannado badan oo waayo-aragnimo hodan ku ah teknolojiyadda dahaadhka, taas oo xaqiijin karta caabbinta duugga ah iyo adeegga muddada dheer ah ee dharka aan dabka lahayn.
Waxaa loo adeegsaday kiishashka dabka iyo kuleylka daboolka ee biilasha, curaarta, shahaadooyinka, lacagta, lacagta, dukumiintiyada muhiimka ah, waxyaabaha qiimaha leh, baytariyada lithium, iwm.
[BAARKA DABKA & BIYAHA U DIIDAN BIYAHA - Badbaadinta Xaaladda oo dhan]:Iyada oo leh FIBERGLASS laba-lakab ah, Bacdayada Lacag-la'aanta ah waxay u adkeysan karaan heer-kulka illaa 2000 F xilliyada qaarkood (UL94 VTM-0). Waqtigaan, SILICONE COATED layers + HOOK & LOOP CLOSURE waxay keeneysaa difaac biyo oo weyn. Boorsadeena dabka diidan ayaa ka badbaadi karta dabka waxayna ku shaqeyn kartaa dhamaan DHAMMAAN xaaladaha cimilada. Ku habboon guriga, xafiiska, safarka, iyo DIYAARINTA DEGDEGGA AH, sida duufaanka roobka, duufaanka iyo dhulgariirka.
[QIIMAYNTA LA QAADI KARO EE QIIMAHA LEH - Baasaboor, Shahaado, Lacag, Furayaal & Dahab]:Ma leedahay waxyaabo badan oo qiimo yar? Ma garanaysid sida loo quudiyo si kaamil ah? iyo cabbirka waa la habeyn karaa, Boorsooyinkayaga Dambiga Dab-demiska ah ayaa si GAAR AH loogu talagalay in lagu keydiyo baasaboorkaaga, lacagta, waraaqaha, sawirrada qaaliga ah, shahaadada, dahabka, furayaasha, kaararka iyo waxyaabo kale oo badan. Iyada oo la adeegsanayo naqshadda 'PORTABLE', waxaan rajeyneynaa inaad HAYSATID DHAMMAAN waxyaabahaaga muhiimka ah SI FIIRO LEH LOOGU DIYAAR GARO & UU UU HAYSTO markasta iyo meel kasta.
[AAN-ITCHY SILICONE COATING - super Easy for Home & Office Use]: AAN-ITCHY SILICONE COATING - Aad ugu Fudud Adeegyada Guriga & Xafiiska]Boorsooyinkayaga lacagta dabka ka diga waxaa lagu daboolay tiknoolajiyad sare oo ah 'NON-ITCHY SILICONE' oo ku dhegan maro fiberglass.Taas macnaheedu waa, uma baahnid galoofisyo aad ku soo geliso ama ku soo gasho waxyaabahaaga qiimaha leh. Boorsadan Lacagta Dab-demiska ahi waa mid aad u fudud in la qaado dhammaanteed, socdaal ganacsi, xafiis, adeegsi guri, iwm. Iyadoo 25% XARUNTA HOK & LOOP XIRAN, Dambiishayada Lacag-la'aanta ah waxay bixiyaan badbaado badan oo AMMAAN leh oo ka qiimo badan kuwa kale iyadoon loo eegaynin goorta iyo goobta aad joogto adeegso.
[SAMEEY QORAALADA JAAMACADDA DABKA DUUMADA AH - Shayga Sharafta leh]:Waxaan xirfad u leenahay inaan siino TOP CLASS Dambiisha Dab-damiska ee suuqa. Alaabtayada kale ee JUMBO waxay kasbadeen WADA-CELINTA weyn ee ilaalinta macaamiisha qiimaha weyn ee weyn. Hada, 2-daan Dambiisha Lacagta Dab-demiska ah ee Dab-demiska ah waa inay ilaaliyaan qiimahaaga yar ee qiimaha leh, waxay si fiican ugu habboon yihiin Bacahayada JUMBO FIREPROOF, waxayna ku siinayaan ilaalinta ugu BADAN DHAMMAAN suuqa.
[SHAQO SARE & SOO WADA SHAQO CELINTA DABKA]:Iyada oo ay ku jiraan dhammaan Waxyaabaha Maroodiga ah ee Tayada Sare leh, Dahaarka silikoon ee aan cuncunka lahayn, Hook waarta & Xiritaanka Loop, boorsooyinkeena lacagta aan dabka lahayn waa kuwo waara, oo ku habboon isticmaalkaaga maalin kasta iyo xaaladaha degdegga ah. Fadlan ogsoonow waxaan soo jeedinaynaa inaan ku keydinno boorsooyinkeena dabka aan dabka lahayn sanduuqa badbaadada dabka si loo helo amni dheeri ah.
Hore: Gogosha dahaarka
Xiga: Gogosha dabka aan la dhigin